Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football any Senegaly Ismaila Sarr Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ny tantaram-piainanay Ismaila Sarr dia milaza aminao ny zava-misy momba ny tantaram-pianakaviany, ny fiainany tany am-piandohana, ny fianakaviany, ny ray aman-dreny, ny vadiny, ny zanany, ny harato net, ny fomba fiainany ary ny fiainany manokana.
Raha fintinina, asehoy ny tantaran'ny mpilalao baolina kitra matihanina Senegaly. Ny Lifebogger dia nanomboka tamin'ny fahazazany ka hatramin'ny nanjary nalaza. Mba hamelomana ny filan'ny tantaram-piainanao dia ity misy galeria ahitra ho an'ny fahasoavana - famintinana tonga lafatra ny Bio Ismaila Sarr's.
Ny fiainana taloha sy ny fitsanganan'i Ismaila Sarr.
Eny, fantatry ny rehetra fa nahazo haingam-pandeha, fikafika ary afaka mahatratra tanjona lehibe izy - fepetra takiana amin'ny FIFA Forward tonga lafatra. Na izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mihevitra ny tantaram-piainan'i Ismaila Sarr izay mahaliana tokoa. Raha tsy misy resaka intsony dia andao aloha.
Ismaila Sarr tantaram-pianakaviana:
Ho an'ireo vao manomboka ny tantaram-piainany, mitondra ny anaram-bosotra hoe “Isma.”Ismaïla Sarr dia teraka tamin'ny andro 25 tamin'ny volana febroary 1998 tany amin'ny reniny, Marieme Ba sy ny rainy, Abdoulaye Sarr Naar Gaad ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka avaratrandrefan'i Saint Louis, Senegal.
Tanànan'ny nahaterahan'i Ismaila Sarr, Saint Louis (naorina 1659) dia raisina ho iray amin'ireo tanàna fanjanahantany tranainy indrindra amin'ny morontsiraka andrefan'i Afrika, izay antsoina hoe foiben'ny frantsay ao Afrika Andrefana. Ity ambany ity ny fahitana ny tanànan'ny morontsiraka tandrefana izay ananan'i Ismaila Sarr ny fianakaviany.
Fahafantarana ny faka-mpianakavian'i Ismaila Sarr- Saint-Louis, Senegal. Sary: Wikipedia
Ismaila Sarr Voalohany: Ilay mpilalao baolina kitra haingana indrindra avy amin'ny fiaviana fianakaviana Afrikana dia nandany ny ampahany voalohany tamin'ny taonany tany Saint Louis. Nihalehibe izy niaraka tamin'ny efatra tamo mpiray tam-po aminy naterak'ireo ray aman-dreniny, izany hoe; Papis, Kiné, Ndèye Ami sy Badara.
Ismaila Sarr dia avy any amin'ny fianakavian'ny fianakavianà antonony ambony izay tantanan'ny dadany izay mpilalao baolina kitra teo aloha. Fantatrao ve?… Ny rain'i Ismaila Sarr, Abdoulaye Sarr Naar Gaad dia iraisampirenena Senegaly taloha izay nilalao ho an'ny firenena Afrikana Andrefana tamin'ny faran'ny taona 80. Ity zava-misy ity dia midika fa ny baolina kitra dia mihazakazaka ao amin'ny fianakaviany noho ny rainy.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fanabeazana sy fanabeazana
Nandritra ny 20 taona mahery taorian'ny fisotroan-dronono tamin'ny baolina kitra dia mora ho an'i Abdoulaye Sarr Naar Gaad ny hifindra amin'ny asa hafa ary hiatrehana ny fisotroan-dronono. Ny dadan'i super na dia eo aza ny fangirifiriana eo amin'ny sehatry ny lalao baolina kitra izay noheverina fa ireo zanany lahy dia tsy tokony hanaiky lembenana amin'ny fampianarana amin'ny baolina kitra. Tany am-boalohany dia nanoratra anarana ireo zanany izy anisan'izany Ismaila Sarr ao amin'ny Sekolin'i Oumar Syr Diagne misy ao St St, Senegal.
Mankahala sekoly: Ismaila Sarr dia nankahala ny sekoly ary tsy faly tamin'ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreniny handefa azy hianatra. Raha ny marina dia tsy azy mihitsy ny famakiana boky an-tsekoly ary ho an'ny maro izay nahafantatra azy teo amin'ny manodidina azy dia toa fombafomba tsotra fotsiny ny fandehanana any an-tsekoly. Matetika izy dia nandingana ny sekoly mba handeha hilalao baolina kitra miaraka amin'ireo namany.
Ny ray aman-drenin'i Ismaila Sarr dia nahazo tatitra ratsy maro avy amin'ny mpampianatra azy ary rehefa nandinika azy ireo izy ireo dia nanapa-kevitra ny handray andraikitra amin'ny zanany lahy. Nasain'izy ireo nijanona tsy nianatra izy ary nentiny an-keriny tany a tompony mpanjaitra eo amin'ny manodidina azy mba hahafahany mianatra mahayny asa na ny varotra amin'ny fika).
Toy ny mpisolovava tsara rehetra, i Ismaila Sarr dia ampy fanetren-tena ka nahalala ireo fototry ny firafitra, izay nataony tamim-pahazotoana. Na izany aza, ny azy feon'ny fieritreretana baolina kitra tsy afaka namela azy hanohy hanompo ny tompony. Raha tsorina, te-hilain'ny baolina kitra ny fony. Tamin'ny farany, ilay zazalahy be herim-po dia nanaraka ny fony rehefa nandao ny fanjairana ary nandeha tamim-pahatokiana miaina ny fitiavany tany am-boalohany, tsy nahazo ny fankatoavan'ny ray aman-dreniny.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ismaila Sarr dia tokony ho nahazo diplaoma tamin'ny taona fahadimy tao amin'ny Sekolin'i Oumar Syr Diagne talohan'ny nialany ny antony ary nisoratra anarana tamin'ny fitsarana AS Génération Foot. Taorian'ny fitsapana nahomby, dia nisoratra anarana tamin'ny kilasy baolina kitra ilay zatovolahy.
Ismaila Sarr Identity Card amin'ny AS Génération Foot. Nahazoan-dalana: Alchetron
Ismaila Sarr dia nanomboka tao amin'ny Akademia mitovy amin'i Sadio Mane. Nianatra ny fototry ny matihanina amin'ny AS Génération Foot izy satria isan'andro dia vintana ho azy tsara indrindra amin'ny asako. Izy no nanampy ny fandrosoana amin'ny klioba manomboka amin'ny diera faharoa mankany amin'ny sidina ambony amin'ny Ligala Senegaly. Ny fahalianany sy ny hafanam-pony tamin'ny baolina kitra dia nahita azy nanonofy ny ho tonga any Eoropa.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Road to Fame
Sahala amin'ny ankamaroan'ny mpilalao baolina kitra miala amin'ny firenena milalao any Eropa, ny frantsay matetika dia ny frantsay-France. Tamin'ny taona 2016 dia nahita an'I Ismaila nandao ny fianakaviany ary nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany niaraka tamin'i FC Metz.
Tsy tokony ho mora tamin'i Ismaila tanora izay mbola tsy nandao ny fireneny sy nilalao tany ivelany aho, raha voatery nifanaraka tamin'ny tontolo vaovao. Noho ny filàm-pihetseham-po, i Sarr dia nijaly noho ny ratra niverimberina, noho ny firoboroboan'ny firotsahana an-tsaha izay matetika no antony mahatonga ny vatany. Ny nandratra hatrany dia nahatonga ny fianakaviany natahotra ny asany. Nanjary matotra ny dadan'i Sarr tsy maintsy niditra an-tsehatra. Raha ny filazan'ny mpilalao baolina kitra;
“Na ny raiko aza matetika niantso ahy, nikiakiaka tamiko hanova ny fomba filalaovako, mba tsy haratra matetika. Saingy tsy azoko natao. Niady foana aho ary nampiady ny mpanohitra ahy mandra-pahatonga ahy ho matanjaka sy mahatohitra ratra kokoa ”
Ny fandrosoan'i Ismaila Sarr niaraka tamin'ny FC Metz dia nahita azy nantsoin'ny ekipam-pireneny - nofinofy tanteraka izany. Ny fiantsoana ny ekipam-pireneny dia narahin'ny fahatairana lehibe teo amin'ny fiainany. Fantatrao ve?… Ismaila Sarr dia afaka nankany Espaina ary niditra tao amin'ny Barcelona lehibe. Ilay mpilalao baolina kitra nampanantena dia nandà an'i Barcelona nilaza fa vao aloha loatra amin'ny asany. Tena tsara ve i Sarr nantsoin'ny Giant Espaniôla?. Ny lahatsary eto ambany dia manazava ny antony mendrika azy niantso an'i FC Barcelona. Jereo ny sasany misongadina amin'ny tanjony.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ismaila Sarr dia tsy niraharaha an'i Barcelona lehibe hiaraka amin'i Rennes izay nanohizany ny endriny famoahana ny tanjony (ny sasany amin'ireo tanjony) araka ny hita ao amin'ny lahatsary etsy ambony. Ity seho ity dia nahita azy nalaza teo amin'ny ekipa Senegalealy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2018.
Raha tao Rennes i Ismaila Sarr dia nanomboka nijery horonantsary an'i Sadio Mane - ny haingam-pandeha, ny dribbling ary ny tanjony. Tamin'ny 13 Desambra 2018, ny tanjona Sarr dia nanampy an'i Rennes hahazo ny toerana misy azy ireo tamin'ny dingana famoahana ny UEFA Europa League 2018-19. Nomena valisoa ny tanjon'ny UEFA Europa ligin'ny vanim-potoana (tanjona voalohany aseho amin'ny horonantsary etsy ambony) 2018–19 nahita klioba manenjika ny sonia nataony.
Tamin'ny 8 Aogositra 2019, niditra tao amin'ny klioban'ny Premier League, Watford i Sarr, tamin'ny sarany famindrana rakitsoratra klioba. Hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny sehatra Premier League dia nisy izany somary lasa tantaram-pitiavana fanampiny ho an'ireo mpilalao FIFA sy mpankafy Watford izay tena talanjona tamin'ny hafainganam-pandehan'i Ismaila Sarr. Tamin'ny fotoana nanoratana, ny fotoana nisongadinan'i Sarr tao anaty lobaka Watford dia teo amin'ny lalao nifanandrinan'i United izay nahazoany volley ary niteraka sazy izay nanampy ny ekipany nandresy an'i United 2-0.
Tsy isalasalana fa nanaporofo an'izao tontolo izao i Ismaila Sarr fa izy no fampanantenana mahafinaritra mahafinaritra aorian'ny taranaka Senegaley Sadio Mane. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Relationship Life
Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazany sy ny fiakaran'ny fanantenana ao amin'ny Lalao Premier, azo antoka ny hoe nisy mpankafy sasany no efa nanomboka nieritreritra ny fisian'i Ismaila Sarr na efa manambady tokoa izy.
Ny marina dia, tsy azo lavina ny fisehoany tsara tarehy lava, endrika manintona, fitsikitsiky mampihetsi-po miaraka amin'ny fahombiazany amin'ny maha-mpilalao baolina kitra azy dia tsy hametraka azy ao anaty lisitry ny fitaovan'ny sakaizany sy vady mety ho izy. Na izany aza, ao ambadiky ny mpilalao baolina kitra mahomby dia misy sipa manintona izay lasa vadin'i Ismaila Sarr. Ity ambany ity ny sarin'i Ismaila Sarr sy ny vadiny izay araka ny DakarBuzz mandeha noho ny anarana Fat Sy.
Mifanena amin'ny vadin'i Ismaila Sarr.
Ismaila Sarr dia nandray fanapahan-kevitra ny hanambady amin'ny mbola kely - talohan'ny nahalany azy ho matihanina. Raha miresaka momba ny fanohanana azony avy amin'ny vadiny, Ismaila indray mandeha dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i DakarBuzz;
“Nanohana ahy be i Fat Sy, ela be talohan'ny nahatongavako ho mpilalao matihanina. Nahavita be ny anjara birikiny tamin'ny drafitry ny asako satria izy no mitantana ny sakafoko, ireo ora fiofanana sy fialan-tsasatra ananako koa. Te hanambady aloha be aho, hananako filaminana satria goavana amin'ny fakam-panahy ny mpilalao baolina kitra. ”
Ity horonantsary eto ambany ity dia maneho ny fitiavana lalina nataon'i Ismaila Sarr ho an'ny vadiny Fat Sy. Ny fisakaizana no iray amin'ireo antony lehibe nahatonga azy hanambady tamin'ny mbola kely.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fiainana manokana
Ny fahalalana ny fiainan'i Ismaila Sarr manalavitra ny baolina kitra dia hanampy anao hanana sary feno momba ny toetrany.
Fantatrao ny fiainana manokana Ismaila Sarr
Fanombohana dia manomboka amin'ny fanapahan-keviny isika amin'ny fotoana mahamety azy. Ismaila Sarr dia olona mino fa misy tanora tanora maniry hanana asa maharitra dia tokony hiezaka hanambady vao maraina. Ilaina izany mba hialana amin'ny fakam-panahy amin'ny fananana raharaha izay hanimba ny fikarakarana azy.
Faharoa, olona manana fomba metodolojika amin'ny fiainana izy. Sarr dia tsy zatra mitaky zavatra, mino ny zavatra mety hitranga amin'ny fotoana mety. Tiany koa ny manao zavatra mifanaraka amin'ny hafainganany.
Farany, tamin'ny fiainany manokana, Ismaila Sarr tamin'ny fotoana nanoratany dia tsy mino ny 'Culture Tattoo'dia malaza eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ankehitriny. Mampiseho ny fivavahany ao amin'ny moskea izy ary mitazona ny fitiavan'ny fianakaviany ao am-pony fa tsy amin'ny vatany amin'ny tombokavatsa.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Na eo aza ny fifanolanana voalohany dia faly ny ray aman-drenin'i Ismaila Sarr namela ny zanak'izy ireo hanaraka ny fitiavany izay nandoa tokoa. Ny fampiharana ny asa fanjairana dia mbola nanampy azy tamin'ny asany. Araka ny voalazan'i Sarr;
"Na dia nandao ny asany manokana aza aho dia nifandray tamin'ny tompoko foana aho ary androany dia mpamorona lamaody ny fianakaviako."
Talohan'ny nandehanany tany Frantsa, Ismaila dia nianiana fa hampifaly azy ireo ny ray aman-dreniny indrindra indrindra amin'ireo sorona nataony ho azy. Sarotra ho an'ny dadany, Abdoulaye Sarr Naar Gaad niatrika ny fisotroan-dronono tamin'ny baolina kitra. Androany izy dia faly miaina ny nofiny indray.
Momba ireo mpiray tampo amin'i Ismaila Sarr: Araka ny filazan'i Ismaila Sarr dia niara-lehibe niaraka tamin'ny iray tam-po taminy. Manan-drahalahy izay mandeha amin'ny anarana hoe Papis Sarr izy izay miasa tahaka ny mpanolotsaina amin'ny asany ary manana rahavavy iray antsoina hoe Kiné, izay tahaka ny reny faharoa. Ny iray amin'ireo iray tampo aminy dia i Ndèye Ami ary ny zandriny dia Badara.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Lifestyle
Taorian'ny fikarohana marobe momba ny fomba fiainan'i Ismaila Sarr dia tsapanay fa lehilahy tsotra fotsiny izy filàna azo tanterahina izay tsy dia lafo. Ity ambany ity ny mpilalao baolina kitra miaraka amin'ny mpiray tanindrazana aminy Cheikhou Kouyaté ary kely dia fantatra ny momba ny fananan'ny fiara ao aoriany.
Fahafantarana ny fomba fiainan'i Ismaila Sarr.
Ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fampiharana sy ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao dia tsy safidy sarotra ho an'ny Ismaila Sarr. Tamin'ny fotoana nanoratany, dia tsy hita fiara mahery vaika loatra i Sarr, tranobe lehibe izay mora hitan'ireo mpanao baolina miaina fiainana miaina fatratra.
Ismaila Sarr tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Untold Facts
Niasa teo anilany izy Sadio Mane momba ny Charity: Ismaila Sarr dia mpilalao baolina kitra izay tsy mamiratra ihany no eo amin'ny sehatra fa ny sasany kosa ao amin'ny fiarahamonina Senegaley. Amin'ny sary eto ambany dia hita fa miara-miasa izy Sadio Mane amin'ny antony manasoa, satria manampy ny tena mahasoa.
Ismaila Sarr dia mamaly ny olony.
Ny hafainganam-pandehany sy tsimok'aretina- Fankasitrahana ho an'ny mpamono FIFA: Ao amin'ny FIFA, tsy misy olona manohana ny mpilalao miadana. Ny fampiasana mpilalao manana Pace dia fepetra takiana raha nanafika na manenjika mpanafika ianao. Sarr izay 21 taona amin'ny fotoana nanoratana dia fitahiana ho an'ny mpilalao FIFA rehefa tonga amin'ny resaka haingam-pandeha sy fanaovana dribbling.
Ho an'ny taonany, Ismaila Sarr's Pace sy Dribble dia fitahiana ho an'ireo Gamers FIFA.
Fantatrao ve?… Sadio Mane ihany no nahavita dribble mahomby kokoa noho ny an'i Sarr's 27 tamin'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika 2018.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaranay Ismaila Sarr Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka ny hanana ny marina sy ny hitsiny izahay. Raha mahita zavatra tsy mety ianao dia mba zarao aminay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Hanome lanja sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Loris Karius tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty efa namboarina: 18 Oktobra 2020
Daniel Sturridge tantaram-pahaterahana ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty navaozina: Novambra 3, 2020
Daty efa namboarina: 6 Oktobra 2020
Tantara Leander Dendoncker momba ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Facts
Daty efa namboarina: 14 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 17 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 19 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 10 Oktobra 2020